Semalt E-Commerce SEO Package - Fitaovana tonga lafatra hamokatra fifamoivoizana
Amin'ny maha sehatra SEO sy Marketing anao, ny Semalt dia natsangana miaraka amina serivisy maro, izany rehetra izany dia mety hahasoa amin'ny orinasan'ny e-varotra. Iray amin'ireo orinasa an'arivony an'arivony iray eto ve ianao? Ianao ve mitady mpamatsy serivisy azo itokisana izay manome antoka ny fifamoivoizana be dia be amin'ny tranokalanao? Eny, nifarana ny fikarohana nataonao. Eto amin'ny Semalt, dia mila ny filanao SEO rehetra izahay. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny serivisinay dia afaka mihetsika eto ianao.
Amin'ny maha-mpandraharaha sy mpandraharaha anao, azonay ny fanaintainanao rehefa miezaka amin'ny ezaka ataonao ianao, saingy tsy misy olona manome lanja izany. Manampy anao izahay hametraka ny orinasanao sy ny orinasanao amin'ny toerana fitadiavana ambony, ary manohy anao izahay.
Ny serivisy ataonay dia tsy manolotra hena kely fotsiny na pizza tsara indrindra; Manome kapoaka tsy tapaka izahay, amin'ny fomba tsy tsara indrindra ho anao iray andro, herinandro na iray volana. Raha mbola mpiara-miasa aminay ianao, ny ekipanay dia hanadihady hatrany ny tranonkalanao ary hanatsara ny laharam-pitehirizany. Hanome anao lalan-dranon'ny fifamoivoizana maharitra izahay izay manampy amin'ny fivarotana ny orinasanao.
Mba hampandehanana ny orinasa e-varotra mahomby ankehitriny, mila fifamoivoizana bebe kokoa hatrany amin'ny tranokalanao ianao. Fa tsy ampy izany; ilainao hijanona koa ireo tsindry ireo, mandia ny tranokalanao ary hahita serivisy na entana ilainy.
Ka inona no ilain'ny tranokalanao hanalavitra izany ary hitondra tombony ho anao, tsara ihany ny valiny - fonosana SEO e-commerce SEO.
Ny tsiambaratelo dia mitoetra ao anatin'ny fahafahantsika mitrandraka fifamoivoizana mahagaga. Mino aho fa naheno SEO ianao, fa raha tsy manahy ianao; manana ny lahatsoratra tonga lafatra ho anao izahay. Mamaky haingana sy mora izany, izay hamonjy anao haingam-pandeha an-tsoratra. Tsindrio eto raha te hahalala ny fototry ny SEO ianao.
Raha efa zatra amin'ny SEO ianao dia fantatrao fa ny fifamoivoizana organika dia tsy mitovy amin'ny loharanom-barotra hafa momba ny tranokalanao. Tsy hoe mahazo tsikitsiky "mahatoky" fotsiny ianao, fa tena afaka tanteraka koa. Amin'ny maha orinasa vaovao, dia takatsika fa tsy mora ny misaraka amin'ny tongotrao. Ny fananganana fifandraisana, ny ady amin'ny alika lehibe ary ny fandoavana ny zavatra rehetra ilainao dia mety ho henjana. Izany dia mahatonga azy ho eo tsy ho afaka tsy handoa vola amin'ny fanentanana karama amin'ny milina fikarohana.
Na dia mahazo kitiho eo noho eo aza ireo serivisy karama ireo, inona no hitranga rehefa lany vola ianao mba hamatsiana izany? Azonao atao ve ny manome antoka fa hihazona io laharana io ny tranokalanao? Izany no antony mahatonga ny fifamoivoizana SEO voajanahary tsara indrindra. Miaraka amin'ny fifamoivoizana organik dia fantatrao fa tsy misy laharana ny tranokalanao satria mandoa vola ianao, nefa fantatrao fa ny E-commerce SEO dia miasa amin'ny fepetra lehibe indrindra.
Saingy, matetika kokoa noho ny tsy, ny mpandraharaha e-varotra dia tsy afaka manararaotra ny tombontsoa SEO. Tsy azon'izy ireo antoka ny fomba hanamboarana pejy fitaterana pejy, momba anay pejy na pejy fandraharahana orinasa / famokarana / famokarana. Io anton-javatra io dia tompon'andraikitra amin'ny fandringanana orinasa marobe izay mety hitranga. Raha tsy misy ny fahalalana sy ny fahaizana mitaona fifamoivoizana dia mijanona tsy manangona otrikaretina cyber ny tranokalanao.
Mandra-pahafahanao mahazo ny SEO anao, ny fampiakarana ny teti-bolanao amin'ny dokambarotra dia tsy hahasoa anao firy. Tsy misy fomba ny hitsidihanao tranonkala iray tsy misy votoaty mahafinaritra ary mijanona. Fa misy lalana hivoahana. Raha tsapanao fa toa mandoka rindrina ianao rehefa manandrana mitarika fifamoivoizana mankany amin'ny tranokalanao dia mila fikitika matihanina ianao. Ary tsy sahala amin'ireo tranonkala maro hafa, izahay dia lafo, mahay za ary mametraka anao voalohany.
Mba hanome anao ny tsara indrindra, ny ekipa dia misy ny toekarena, mpikaroka, mpanoratra ary manam-pahaizana manokana momba ny fiantohana ny zavatra rehetra ilainao sy ny tranonkalanao. Amin'ity fomba ity, tsy misy olona sahy mikapoka anao ho any an-tampony.
Fahalalana SEO E-commerce mahomby izay azonao ampiasaina mba hahazoana toerana ambony
Alohan'ny hanombohantsika mizara toro-hevitra vitsivitsy dia namolavola ireto torohevitra ireto miorina amin'ny fikarohana be dia be momba ny fomba nahazoantsika ny tranonkalantsika ankehitriny hanisa, ny hevitry ny tsena, ny ankehitriny ary ny fomba tsara indrindra. Alohan'ny hanandrahanao ny tsirairay amin'ireto torohevitra ireto dia te-hanazava fa ny tranokala rehetra dia miavaka sy manokana. Midika izany fa tsy misy antoka hoe miasa ho anao ity. Mba hahazoana ny tsara indrindra, dia mila ny tsara indrindra ianao. Raiso ny ekipa matihanina handalovanao ny tranokalanao ary omeo azy ilay fikitika matihanina.
Amin'ny tenanao manokana, ny fanovana ataonao ao amin'ny tranonkalanao dia tokony hatao amim-pitandremana.
Avelao ny milina fikarohana hamaky ireo valiny ao amin'ny tranokalanao
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hisarihana ny mpanjifa vaovao dia ny fanaovana ireo fanehoan-kevitr'ireo mpampiasa efa zokiolona hita maso azy ireo. Io koa dia mampitombo ny fahitanao miaraka amin'ny fampahalalana tsy manam-paharoa amin'ny pejy famaritana. Tsy misy te hividy amin'ny mpivarotra tsy misy hevitra. Miaraka amin'ireo mpisoloky maro amin'ny Internet, mila manorina fitokisana ianao alohan'ny hahafahan'ny mpividy manaingo ny serivisinao. Ny fikarohana dia naneho fa mihoatra ny 90% amin'ireo mpampiasa internet no matoky ny mpividy momba izany. Amin'ny alàlan'ny fanehoanao ny hevitrao amin'ny motera fikarohana, ny fahatokisan'ny mpividy dia matoky tena momba ny tranokalanao sy ny vokatra misy anao. Avy eo, tsy hanana olana hitsidika ny tranokalanao izy ireo hanamarina anao.
Ny fanasongadinana ireo hevitra ireo dia mahafinaritra ihany koa amin'ny ezaka SEO e-varotra. Ny valin-kafatra azo avy amin'ny votoaty dia manonona ny serivisy sy ny teny fanalahidy SEO hafa izay mbola mipoitra amin'ny tranokalanao. Fantatry ny Google ireto, ary ny tranonkalanao dia mety hahita toerana tsara kokoa.
Ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny famerenan'ny mpividy dia ny hanomezana fomba fijery ireo mpividy. Tonga lafatra izany satria izy ireo dia miresaka amin'ireo tombontsoa izay entinao avy amin'ny fomba fijery tsy manam-paharoa.
Mamorona famaritana Meta Dynamic
Ny famaritana Meta anao dia ny fitafianao amin'ny fivoriana rehetra. Ny fomba hisehoany dia mamaritra ny fomba handraisan'ny mpikambana ao amin'ny birao anao. Akanjo marokoroko manana fehikibo tsy azo antoka fa tsy hahazo anao izany fifanarahana izany. Rehefa mampiseho valiny an-tserasera ny motera fikarohana dia manampy fanoratra kely izy ireo eo ambanin'ny lohahevitra na tranokala manazava ny ho hitanao raha tsindrio io rohy io. Izany no antsointsika hoe metadata. Ny metadata anao dia zava-dehibe amin'ny fandresena ireo mpampiasa mba hanindry ny rohy anao fa tsy ny hafa.
Manoratra famaritana meta, raha tsy misy teny fanalahidy dia tsy tsara. Toy ny fijerena ny dokam-barotra iray izay tsy mitanisa ny vokatra izay tadiaviny. Amin'ny maha-mpandraharaha e-varotra izay manova tsy tapaka ny vokatra azony, ny fanazavan-kevitra momba ny meta dia hiova tsy tapaka ary hitady lalana hitazomana azy io dia mety ho sarotra ihany. Amin'ny maha orinasa kely anao io fandaniam-potoana io sy fotoana izay tsy anananao be dia be no antony mahatonga ny ankamaroan'ny orinasa misafidy ny manam-pahaizana SEO toa an'i Semalt hanampy azy ireo.
Farany, ataovy azo antoka ny tsy fahitan'ny metadata anao. Te hino ny mpamaky anao fa hafa sy manokana ianao alohan'ny hitsidihan'ny tranokalanao anao.
Ataovy tsy manam-paharoa ny famaritana ny vokatrao
Ny atiny tsy manam-paharoa dia lasa laharam-pahamehana nanomboka tamin'ny namoahan'ny Google ny algorithm algorithm. Ity algorithm ity dia mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny kalitao avo lenta. Ny tanjon'ity fampandrosoana ity dia ny hanasaziana tranokala izay mandika ny votoatin'ny tranonkala hafa.
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanamafisana ny tranokalanao dia ny alàlan'ny votoaty tokana tokana ary SEO. Mametraka anao amin'ny toerana tsara indrindra ahitanao izany ary mahatsapa fahatsapana tokana ny mpitsidika anao izay manamora ny fividianana sy ny toro-hevitra.
Ho an'ireo tompona tranokala efa misy, dia fahendrena ny manamarina ny tranokalanao amin'izay mety misy dikan-teny avoaka. Raha misy mahita dia manorata izany. Manome tombony ho anao amin'ny fifaninanana ataonao izany.
Mampiasà marika schematic
Ny marika schematic dia iray amin'ireo fitaovana manan-danja indrindra rehefa miatrika eCommerce SEO. Mampalahelo fa mbola mijanona ho iray amin'ireo fitaovana marobe indrindra amin'ny E-commerce SEO izy io. Ireo snippets kely ireo dia manatsara ny valim-pitiavanao amin'ny alàlan'ny fametrahana ny mari-pahaizana kintana sy ny vidin'ny vidiny mivantana amin'ny Google. Efa tsikaritrareo fa aleonao miantsena amin'ny tranokala ahitanao ny vokatra sy ny vidiny dia eo amin'ny pejy valin'ny Google? Ity no fitaovana lehibe ampiasainay amin'ny tranokalanao.
Na eo aza izany dia tsy isan'ny laharam-pahamehana, fa ity fampahalalana mahaliana hita maso ity dia manome antony manosika ny mpampiasa tsirairay hanipy ny rohy.
Miaraka amin'ny fikasihanay matihanina sy ireo endri-javatra mahaliana rehetra ireo, dia tsy misy antony tokony tsy anananay anay hahatongavan'ny tranonkalanao ho eo an-tampon'ny laharan'ny Google. Imbetsaka isika dia manandrama ny tsara indrindra ataontsika mba hampihenana ny vidiny saingy amin'ny vola inona? Amin'ny fanananao fanampiana tsy matihanina dia tsy manome ny tranonkalanao fotsiny ireo voka-dratsy tsara indrindra ianao. Tsy misy olona afaka manao ny zava-drehetra azon-tanana tokana, ary satria maniry hanampy ny orinasa ihany koa izahay hitombo dia azo antoka ny serivisy ataontsika. Raha manana fanontaniana ianao, azonao atao ny mifandray amin'ny serivisy fikarakarana ny mpanjifa eto . Vonona foana izy ireo hanatrika ny filanao. Sariaka izy ireo ary tia mandre avy aminao, ka aza misalasala. Hamaly ny fanontanianao rehetra momba ny serivisinay na ny fanontaniana momba ny SEO izy ireo. Tsy andrintsika ny handrenesana anao.